Ngaba ukuseta kwale mihla kubamba intsholongwane? - Faq
Eyona > Faq > Ukusingathwa kwemodem- isisombululo esisebenzayo
Ukusingathwa kwemodem- isisombululo esisebenzayo
Ngaba ukuseta kwale mihla kubamba intsholongwane?
Ukuseta uMbutho walemihla(setuphost.exe) ayisiyiyointsholongwanengokuzenzekela. Yinkqubo yokwenyani yeWindows eyenziwe nguMicrosoft ukufaka uhlaziyo olukhutshelwe nguHlaziyo lweWindows. Nangona kunjalo, nayiphi na inkqubo inokubakhointsholongwaneukuba i-malware iyaziguqula njengenkqubo. Ke, ukuba ukhathazekile ngayo, iskene ngesoftware ye-antivirus.30 Oktobha. 2019
Ngaba kulungile ukuphelisa ukusingathwa kwale mihla?
Ukuseta uMbutho walemihlaye Windows 10 isetyenziselwa ikakhuluukufakaokanye ulungiselela uhlaziyo kwikhompyuter yakho. Ukusukela ukuba ikhompyuter yakho yafumana uhlaziyo kutshanje, asikukhuthazi ukuyeka inkqubo njengoko kunokubangela inkxalabo eyongezelelweyo. Nangona kunjalo, ezinye i-malware zizifihla njenge-SetupHost.exe okanyeUkuseta uMbutho walemihla.Oktobha 4 Ngo-2017
Namhlanje siza kuthetha ngendlela yokwenza umxholo wakho we-WordPress ngokwezifiso. (umculo oqaqambileyo, owonwabileyo) Kweli nqaku, ndiza kuhamba nawe ngokwezifiso umxholo wakho we-WordPress, ndikuncede uthathe isigqibo sokuba zeziphi ezifanelekileyo, kwaye ndikubonise indlela yokwenza ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo Kulungile, masiqale , nantsi into esiyigubungelayo malunga nokufaka iplagi.
Ukuba ufuna ukongeza ukusebenza kumxholo, kuya kufuneka ufake iplagi. Ukuba ufuna ukutshintsha iifonti, imibala, kunye nokubekwa komxholo wakho, ungakwenza oko usebenzisa i-customizer kwiscreen sakho solawulo seWindowsPress. Ukuba usebenza nomxholo woLwakhiwo lwePhepha, sebenzisa amanqaku oMakhi wePhepha ukwenza ngokwezifiso uyilo lwendawo yakho, kwaye xa ufaka umxholo wesakhelo, ungasebenzisa nayiphi na imixholo yabantwana ekhoyo ukwenza indawo yakho ihambisane nokwenza ngokwezifiso iinketho zokwenza ngokwezifiso ziyafumaneka kwizikrini zomlawuli; ukuba umxholo wakho ucacile kwindawo yakho kwaye wonwabile ngayo, hlela ikhowudi yomxholo ngqo.
Ukuba ufuna ukuhlela ikhowudi kwisihloko somntu wesithathu, yenza icandelwana. Ukuba ufuna ukuhlela ikhowudi ngoku, kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo, ukusuka ekusebenziseni umhleli webhloko ukuya kumthengi kunye nokuhlela iifayile. Siza kujonga yonke into kweli nqaku, kodwa masiqale ngokhetho olulula, olokufaka iplagi.
ivuselele iofisi ngo-2013
Imixholo ichonga uyilo lwendawo yakho, ukuba ijongeka kanjani, kwaye umxholo uboniswa njani. Iiplagi zongeza ukusebenza okongeziweyo. Xa usenza ngokwezifiso umxholo wakho ukongeza amanqaku yile nto uyikhangelayo emva koko akufuneki utshintshe umxholo, vele ufake iplagi.
Imizekelo elungileyo yento onokuyisebenzisela iplagi endaweni yomxholo ibandakanya ukongeza iiwijethi, ukubhalisa iintlobo zesiko kunye neerhafu, ukwenza amasimi esiko, kunye nokongeza amanqaku ongezelelekileyo njengevenkile okanye izongezo zeSEO Ukuba ufuna ukuzenza zijolise kwaye zilula, unokwazi ukuzenza ngezikrini zomlawuli. I-Customizer ikunika iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo ukuze uguqule umxholo wakho. Okufumanekayo kuwe kuxhomekeke kumxholo wakho.
Kuwe unokubona into ebizwa ngokuba nguMhleli kwimenyu yokuBonakala. Kuphephe oku ngezizathu endiza kuzichaza okomzuzwana. Ukwenza ngokwezifiso iWindowsPress yeyona ndlela ilula yokwenza umxholo wakho weWindowsPress.
Ungayifumana ngeendlela ezimbini. Xa ujonga indawo yakho, uya kungena ungene emva kokungena, emva kokungena, nqakraza kwikhonkco eliqhelekileyo kwisithuba somlawuli phezulu kwesikrini.
Ukusuka kwiscreen somlawuli, cofa ukuBonakala, emva koko ucofe i-Customize. Oku kuya kukusa kuMthengi. Apha ndiyabona ndongeze umxholo wemagazini yemibala yasimahla enokhetho oluninzi lokwenza ngokwezifiso.
Amacandelo afakwe kwi-customizer yeempawu eziyilwe, kubandakanya umfanekiso wentloko, imidiya yoluntu, imibala yodidi, kunye nethebhu yokukhetha uyilo ekhokelela kwiithebhu ezininzi onokuzitshintsha ukuze zilungele ubume kunye noyilo lwewebhusayithi yakho. Imixholo eyahlukeneyo ineendlela ezahlukeneyo zokwenza ngokwezifiso, kodwa imixholo emitsha ibonakala iqhubeka nokongeza ixesha lonke. Ukuba ufumana umxholo owuthandayo kodwa ongakulungelanga, unokufumanisa ukuba ukwenza ngokwezifiso kuya kukunika uyilo oluchanekileyo kunye nolwakhiwo oluyidingayo.
Okulandelayo, masithethe ngokufutshane malunga nesihleli somxholo kwaye kutheni ungayisebenzisi. Kwisikrini sakho somlawuli, unokujonga ukhetho ekuthiwa nguMhleli woMxholo onokufikelela kulo kwiNkangeleko kwaye emva koko iifayile zoMhleli woMxholo kuyilo lwakho oluthetha ukuba ungazihlela ngokuthe ngqo, kodwa linda, ungenzi nto okwangoku. Nokuba uqhelene nokubhala i-CSS okanye i-PHP, ukuhlela iifayile kuyilo lwakho luluvo olubi ngezizathu ezininzi.
Ukuba uthengile okanye ukhuphele umxholo wenkampani yesithathu, naluphi na utshintsho olwenzileyo luya kulahleka ngexesha elizayo xa uhlaziya umxholo, kwaye ngenxa yezizathu zokhuseleko, ufuna ukugcina umxholo wakho usexesheni njengohlobo lwangaphambili lwefayile oluya kuthi ingatshintshwa. Banokwenza umonakalo ongenakulungiseka kwindawo yakho. Ukuba uhlela ikhowudi kuyilo lwakho olukhangelayo, sicebisa ukuba kusetyenziswe indawo yokubonisa ngaphambi kokwenza oku kwiifayile zakho eziphilayo.
Ukuba ujonge ukuhlela umxholo wethu wangaphandle, kuya kufuneka wenze oku ngomxholo womntwana. Siza kungena koku kungekudala. I-WordPress iyazi ukuba umhleli womxholo unokuphazamisa iifayile zakho kunye nendawo yakho kunye nabakhi kunye nezakhelo zokwenza umxholo wakho we-WordPress ngokwezifiso.
IWordPress sele ibonelela ngeendlela ezininzi zokwenza ngokwezifiso umxholo wakho ngokutshintsha uyilo kunye nolwakhiwo nge-customizer. Kodwa eminye imixholo iya phambili kwaye yenzelwe ukuba yandiswe kwaye yenziwe ngokwezifiso ngokubonakalayo. Le mixholo ibizwa ngokuba zizakhelo zomxholo.
Iiplagi zoKwakha amaPhepha ziyilelwe ukwenza kube lula kuwe ukuba uyile indawo yakho ngokusebenzisa ujongano lomsebenzisi olubonisa into oyifumanayo. Ufakela iplagi yokwakha iphepha ngomxholo ohambelana nayo kwaye emva koko usebenzise iinketho ezikunika zona ukwenza indawo yakho ngendlela oyifunayo. Umakhi wephepha owaziwayo ngu-Elementor.
Abakhi bephepha bakunika ukuguquguquka okukhulu kuyilo lwephepha lakho. Ukuba usebenzisa umakhi wewebhusayithi njengeWix banokwenza uguquko lube lula kwiWordPress. Ukuba ukhetha ujongano lweWYSIWYG kumxholo wakho weWindowsPress, banokukunceda uyile amaphepha ngokukhawuleza.
Enye indlela yokwakha iphepha zizakhelo. Ezi ziisuti zomxholo ezenzelwe ukusebenzisana, kukho umxholo wabazali osisakhelo kunye nokukhethwa kwemixholo yomntwana onokuyisebenzisa ukwenza umxholo oyintloko wenze ukuba kubonakale ngathi ufuna. Umzekelo omkhulu wezakhelo zemixholo yi-Divi, eneenketho zokwenza ngokwezifiso ezikuvumela ukuba ucoce uyilo lomxholo womntwana wakho nangakumbi, kubandakanya indawo yokutsala kunye nolahlo olufanayo nolu lwabakhi bephepha abakuvumela ukuba wenze ngokulula ikhowudi yomxholo wakho ngeCSS kunye hlela i-PHP, emva koko unolawulo olukhulu.
Ukuba uhlela umxholo wakho ocacileyo kwindawo yakho kwaye uyilelwe yona, unokuhlela umxholo ngokuthe ngqo. Usebenza ngomxholo weqela lesithathu kwaye ufuna ukuwuhlela. Kuya kufuneka wenze umxholo ongezantsi ukuthintela ukuphulukana notshintsho lwakho ngexesha elizayo xa umxholo uhlaziyiweyo.Wonke umxholo weWordPress unetayitile ebizwa ngokuba yi-style.css.
Inayo yonke ikhowudi ukuyila iwebhusayithi yakho, ubeko, imibala yefonti, kunye nokunye. Lumka xa uhlela iphepha lesitayile. Ukucaciswa kuthetha ukuba ikhowudi yento ayihlali ivela apho ucinga ukuba ikhona; Izinto zizuza isitayile kwezinye izinto kulawulo lwephepha ngaphandle kokuba wongeze isitayile esithile, esichaza into engezantsi.
Ukufumanisa ukuba zeziphi izinto i-CSS ezichaphazela iphepha. Ungasebenzisa umhloli wesikhangeli sakho ukufunda i-CSS. Ungayisebenzisa le nto ukubhala i-CSS entsha eya kuthi ijolise kwizinto ezizezinye okanye uthotho lwezinto okanye iiklasi kwiphepha.
Ukuba umtsha kuyo yonke le nto, iklasi, kunye nengcaciso ethile, unokufuna ukunqanda ukuhlela umxholo wakho we-CSS ngokuthe ngqo, ubuncinci de ube ufunda ngakumbi ngeCSS kunye nendlela esebenza ngayo. Enye ifayile enesihloko esifanelekileyo iya kuba yifayile yokusebenza. Le yifayile efumana izinto ezininzi ezihamba kumxholo wakho.
Ngaphakathi, uya kufumana ikhowudi yokurejista amanqaku omxholo njengemifanekiso ebonisiweyo, iiwijethi kunye nokunye. Ukuba uhendelwa ukongeza ikhowudi esebenzayo kumxholo wakho, yongeza apha. Kodwa yazi ukuba kwiimeko ezininzi kuya kufuneka ubhale iplagi kwaye ufuna ukugcina oku kusebenza ukuba nditshintsha isifundo kwixa elizayo? Ukuba impendulo nguewe, bhala iplagi endaweni yokongeza ikhowudi kwifayile yokusebenza.
Iiplagi zifuna ukuba akukho nto ikuthintelayo ekubhaleni enye yemigca embalwa yekhowudi. Ifayile yomsebenzi ibhaliwe kwi-PHP, ke kuya kufuneka uyazi kakuhle. Musa ukukopa ngokungaboniyo ikhowudi oyifumana kuGoogle -Khangela ukuKhangela.
Thatha ixesha lokufumanisa ukuba le khowudi yenzani kwaye uyiqonde Ngale ndlela akunakufane ukuba ungeze ikhowudi engalunganga njengoko kufanelekile. Uninzi lweefayile kumxholo ziifayile zetemplate yomxholo. Ezi ziifayile ezichonga umxholo we-WordPress kwiphepha elithile kwaye zikhethwe ngokolawulo lwetemplate.
Ukuba ufuna ukutshintsha indlela umxholo okhutshwa ngayo kwisithuba esithile sefic, iphepha okanye indawo yogcino kuya kufuneka uhlele enye yezi fayile okanye wenze entsha. Masithi umxholo wakho unogcino.php wefayile osetyenziselwa ukukhupha amaphepha agciniweyo kudidi kunye neethegi.
Utshintsho kwindlela iithegi ezimakwe ngayo okanye ezikhutshiweyo. Ke wenza ifayile ebizwa ngokuba yithegi.php ethi, kunye nokwenza kwakho ngcono, isekwe kwifayile ye-archive.php.
Kwakhona, lumka xa uhlela iifayile, zinokonakalisa indawo yakho. Hlala uvavanya kufakelo lwasekhaya kunye okanye kwindawo yokubeka kuqala. Nokuba yeyiphi na kwezi ntlobo zefayile kufuneka uyihlele, kuya kufuneka uyenze ngokuchanekileyo.
Ukwenza ngokwezifiso umxholo wakho we-WordPress ayisiyiyo yonke loo nto inzima, kodwa thatha ixesha lokufumana ukhetho olulungele wena ukuze ukwazi ukwenza ngokwezifiso ulwenziwo lwakho ngaphandle kokulimaza indawo yakho. I-WordPress yeKinsta Hosting inokukhawulezisa iwebhusayithi yakho ukuya kuthi ga kwi-200% kwaye ufumane inkxaso ye-24/7 kwiinjineli zethu ezinamava zeWordPress. Masikubonise umohluko weKinsta.
Zama idemo yasimahla yedeshibhodi yam yeKinsta kwi Enkosi ngokubukela kwaye ungalibali ukubhalisa kwizifundo ezininzi, umxholo olula kunye noluncedo njengalo. Ndizokubona kwelizayo. (umculo oqaqambileyo, owonwabileyo)
Ndiyilungisa njani i-host host yangoku?
Bamba ilogo yeWindows kwaye cinezela R.
Chwetheza msconfig kwaye ucinezele u-Enter ukuvula ubumbeko lweNkqubo.
Khetha ithebhu yokuqalisa kwaye ucofe Vula uMphathi woMsebenzi.
Khetha ithebhu yokuqalisa, kwakhona.
Khubaza sonke isicelo ngeli xesha, ngokwenza ngokunqakraza ekunene kwisicelo kwaye ukhethe.
Vala uMphathi woMsebenzi.
Qala kabusha umatshini wakho weWindows.
Sebenzisa ukuphuculwa kweWindows.
NgoFebruwari 2 2020
I-SEO, intengiso yemidiya yoluntu, ukuthengisa nge-imeyile, intengiso yePPC.
Uqala phi kwaye uzisebenzisa njani ukuqhuba ukugcwala ngakumbi kwiwebhusayithi yakho? Ukuba usaqala kwintengiso yedijithali kwaye ufuna ukwaphula ingxolo ke qhubeka ubukele kuba ndiza kukubonisa ukuba isebenza njani yonke le nto ngokusekwe kwishumi lamava, hayi ithiyori nje. Hlala ubukele, yintoni abathengisi, uSam Oh apha kunye nee-Ahrefs, isixhobo se-SEO esiza kukunceda wandise ukhuphiswano lokugcwala kukhuphiswano kunye nokulawula indawo yakho. Namhlanje ndiza kwabelana ngeendlela ezi-7 zokuthengisa ezidijithali endizisebenzisileyo kwaye ezifumene iziphumo.
ezimbini zokujonga eskrinini
Kwaye ukuba inye kuphela into oyisusayo kweli nqaku, ayizukuzama zonke ngaxeshanye; endaweni yoko, khetha esinye sezi zicwangciso, ulinge, kwaye ubambe ijelo ngaphambi kokudlulela kwelandelayo. Masifike kuloo nto. Ke ngaphambi kokuba singene kwezi zicwangciso, kuya kufuneka uqiniseke ukuba wamkela iingqondo zabathengi banamhlanje.
Namhlanje siphila kwihlabathi 'lokuqala-umxholo'. Abantu sijonga ulwazi phambi kokuba bathenge. Ke kuyakufuneka uzifake kwizihlangu zomthengi endaweni yokuba ungaboni ngenxa yokuba uzifumana zikhulu kangakanani iimveliso kunye neenkonzo zakho.
Isimo sengqondo osifunayo kufuneka uncede abantu kunokuba uzame ukubathengisa ngokungakhathali. Xa unceda abantu ukusombulula iingxaki ngomxholo wasimahla kunye nexabisekileyo ochaphazelekayo kwishishini lakho, uya kufikelela kubaphulaphuli abakhulu kwaye wakhe ukuthembana. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ikunika ithuba lokubonisa abantu ukuba iimveliso kunye neenkonzo zakho zinokubanceda njani ukusombulula iingxaki zabo kunye nokuhlangabezana neemfuno zabo.
Kulungile, ke isicwangciso sokuqala sokuthengisa kwi-intanethi sibhloga nge-SEO engqondweni. Ukubhloga akuthethi kubhala malunga nento oyenzileyo namhlanje, okanye kwinto entle efana nesityhilelo onaso. Le yidayari.
Kodwa ungandivi kakubi. Olu hlobo lomxholo lunokusebenza kakuhle xa unabaphulaphuli abakhoyo nabathembekileyo. Kodwa uninzi lwethu lujonge nje ukufumana uninzi lwezithuthi, ukukhokelela kunye nokuthengisa, kufuneka sijongane nenjongo ngenjongo yokuba abaphulaphuli bakho bajonge ukusombulula.
Kwilizwe lokubhloga, yonke le nkqubo inokushwankathelwa njengenkqubo ebizwa ngokuba ligama eliphambili lophando. Makhe ndikubonise imizekelo emibini ecacileyo yendlela igama eliphambili elisebenza ngayo lisithi, 'Uthengisa iimveliso ezibonakalayo ezinje ngamalungu ekhompyuter kunye nezixhobo. Ngaba ucinga ukuba abathengi bexesha elizayo banokukhangela ntoni kuGoogle? Mhlawumbi imibuzo enje: Kutheni ikhompyuter yam icotha kangaka? Ndiyakha njani ikhompyuter? Ndingayikhawulezisa njani ikhompyuter? Ezi zizona ngxaki zokwenyani kwaye abantu bafuna izisombululo.
Ngapha koko, iAhrefs 'Amagama aphambili uMhloli asixelela ukuba oluphendlo lufanayo lufumana amashumi amawaka okukhangela inyanga nenyanga. Eyona nto intle malunga noku kukhangelwa kukuba unganceda abantu abaneengxaki zabo ngelixa usongeza iimveliso kwivenkile yakho ukuya kumxholo. 'Kutheni ikhompyuter yam icotha kangaka' inokuba ngenxa yehard drive, i-CPU, okanye ingxaki ye-RAM.
Nceda abafundi bakho bafumane ingxaki kwaye banike izisombululo zemveliso kwiposti yakho. 'Uyakha njani ikhompyuter' iya kuba sisidibanisi esilula kuzo zonke izinto zekhompyuter. Sele bebonakalisile injongo yokwakha, ke akunakulindeleka ukuba sele bezithengile iindawo kunye nezixhobo.
Kulungile, umzekelo wesibini. Masithi ungumthengisi wezindlu kwaye ufumana imbuyekezo xa umntu ethenga, ethengisa, okanye erenta ipropathi. Abathengisi abaninzi baqhayisa malunga nokuba mangaphi amakhaya abathengisileyo okanye indlela abaphumelele ngayo ixabiso apho mna nawe singazange sive ngento yam kukuba umthengi ophakathi okanye umthengisi akakhathali.
Kwaye ukungqina into endiyithethayo, akukho mntu ujonga izinto ezinje: Yeyiphi iarhente ephumelele amabhaso amaninzi eNew York? Kodwa kwakhona, abathengi abanokubakho bafuna izisombululo kwiingxaki zabo; iingxaki ezinje: indlela yokutyala imali kwizindlu nomhlaba; uyithenga njani indlu; yeyiphi into efanelekileyo yokuthenga ngetyala ukuze uthenge indlu; kwaye bonke banakho ukutsala abaphulaphuli abaninzi. Ngokubeka kuGoogle ngento efana 'nendlela yokutyala imali kwizindlu nomhlaba', ngoku utsala abathengi abanokubakho ngezipaji ezinkulu kunye neenjongo zokuthenga. Ungawuthenga njani umxholo wasekhaya onokufuna umsebenzi womrhwebi onokubakho ngaxa lithile. 'Yintoni efunekayo ukuthenga ngetyala ukuze uthenge indlu' yindlela entle yokwenza oko Bonisa ukuba ulwazi kunye neenjongo zakho zingaphaya kokuthengisa.
Eyona nto intle ngokubhloga i-SEO kukuba wakuba ufumene inqanaba, uyakufumana simahla, ngokungaguquguqukiyo, kunye nokuhamba kwezithuthi ezivela kuGoogle. Ukuba umtsha kwi-SEO, ndincoma kakhulu ukuba ujonge i-SEO yethu yenqaku labaQalayo, eya kukunika isishwankathelo esihle sokuba yintoni i-SEO, isebenza njani, kunye nendlela yokusebenzela wena. Ndiza kuqhagamshela kwezinye izixhobo ezingundoqo zophando eziya kuqhuba ukugcwala kunye nokuthengisa.
Kunye nenqaku lendlela yokubhala iposti yebhlog une-SEO engqondweni. Ngoku masiqhubekele kwisicwangciso sesibini, esiza kutyala imali kumxholo wenqaku, ngakumbi kwiYouTube. I-YouTube yeyona injini yokukhangela yesibini etyelelweyo.
Kwakhona, amanqaku e-carousels aphantse aphindeka kabini kwiziphumo zophendlo lukaGoogle kwi-2017. Vi deo ayisiyiyo ikamva nje. Kungoku nje.
Kwaye umgaqo ofanayo wokuxhobisa amathemba uyasebenza nakumanqaku. Xa abantu besiya kwiinjini zokukhangela ezinje ngeYouTube, bafuna iimpendulo kwimibuzo yabo. Umzekelo, ukuba uthenge into ebizwa ngokuba 'yintsha' i-iPhone X kwi-eBay, unokukhangela i 'iPhone X Unboxing' kwaye ubone ukuba konke okuqulathwe ebhokisini.
Kwaye ngokwe-Ahrefs 'Amagama aphambili okuKhangela, ifumana ukukhangela okungama-108,000 kwihlabathi liphela inyanga nenyanga endaweni yeYouTube lelo gama liphambili. Ngapha koko, eli nqaku ulibukeleyo lakhethwa kuba ndibona abantu bekhangela ngokuthe ngqo izifundo zokuqala zentengiso yedijithali. Ukuza nemibono yesihloko efunwa ngabantu kwi-niche yakho, yiya phambili kwi-Ahrefs's 'Keyword Explorer, tshintshela injini yokukhangela kwiYouTube, kwaye ujonge igama eliphambili kwi-niche yakho.
Thatha 'izithambiso' njengomzekelo. Ngoku 'ukwakheka' akukho ngxaki njengegama eliphambili elahlukileyo. Ke makhe siphume siye kwiNgxelo yeMibuzo, apho ungabona khona imibuzo edumileyo efunwa ngabantu ngesihloko sakho, kwaye kwangoko uya kubona izimvo ezikhulu ezinje ngeziNdlela zokuCoca iibrashi zokuBumba kunye nendlela yokuGquma amaBala ngamaQwele.
Ukuqalisa kwakhona kwe-norton kuyadingeka
Ukuba uwenza la manqaku ngoku, zama ukuwakhulula kwaye usonge kangangoko unakho. Oku kusincedile ukuba sikhulise izimvo zethu ze-YouTube ngaphezulu kwe-150,000 yokujonga ngenyanga kwaye eyona nto ibaluleke kakhulu, njengoko onke amanqaku ethu ebonisa ukuba izixhobo zethu ze-SEO zinokunceda njani, oku kukhokelele kumawakawaka eentlawulo ezintsha, izikhokelo kunye nabathengi ngokukodwa abakhankanyiweyo ukuba bafumene thina kwiYouTube. Uninzi lokukhula kwenqaku lethu luvela kwi-YouTube ye-YouTube, ke ndiza kushiya amakhonkco kwisifundo ukukunceda ukukala amanqaku akho kunye nokufumana umbono ngakumbi.
Okulandelayo yintengiso yemidiya yoluntu. Endaweni yokugubungela yonke inethiwekhi yemidiya yoluntu, ndifuna ukwabelana nawe ngeengcebiso ezimbalwa eziza kukunceda ukhulise amajelo akho eendaba ezentlalo. Eyokuqala kukugxila kwisitishi esinye seendaba zentlalo ekuqaleni; Kuthatha ixesha ukwakha oku kulandelayo.
Kodwa amanani ayizizo zonke izinto. Into oyifunayo lulandelayo ngokunyaniseka. Ukuntywila iinzwane zakho kuyo yonke inethiwekhi yemithombo yeendaba zentlalo kuya kwahlula ingqalelo yakho kwaye kunciphise iziphumo.
Ke leliphi ijelo lokuthengisa kwimidiya yoluntu olikhethayo? Oko kusikhokelela kwincam yesibini, okt, oko kukuthi, yiya kwindawo ekujoliswe kuyo kwaye uye eqongeni. Ukuba konke okufuneka ukwenze kukukhetha inethiwekhi enye, ayikokukhetha enye enabasebenzisi abasebenzayo, imalunga nokuqonda abaphulaphuli abakhoyo kwaye ukuba ungasinika isizathu sokuba bekhona. Kuya kufuneka ucinge malunga nokuba kutheni umntu engena kwinethiwekhi yemithombo yeendaba.
Umzekelo, abantu bahlala kwiYouTube ukuze bafunde ukwenza into okanye ukonwatyiswa. Kodwa i-Facebook yahlukile. Cinga ngayo, ngaba ukhe ubhalise ku-Facebook unethemba lokuba uza kubona i-unboxing tutorial? Okanye okungcono, ukhe wayivula i-app yakho ye-Facebook ngethemba lokufumana ixesha elinikiweyo elingama-97% kwisaphulelo esinexabiso eliphantsi, kuphela kwimizuzu engama-37 elandelayo? Mhlawumbi akunjalo.
Abantu abajongi kuFacebook ngekhadi letyala ngesandla. Abantu bathanda kwaye babelana ngezinto eziluncedo, ezinomdla, ezothusayo, okanye ezihlekisayo. Ke ukuba ufuna ukuzama ukufumana abantu kwihlabathi lakho, thaca umyalezo wakho njengebali.
Ividiyo okanye enye into enokuthi ivelele kukutya okungapheliyo kweefoto zeholide. I-Pinterest, kwelinye icala, iyinjini yokukhangela ekuhlaleni apho abantu banokulawula oko bafuna ukukukhangela, ukukhuthaza, ukufunda nokucwangcisa izinto. Yenza umxholo ohambelana neenjongo zakho zokubakho.
Ukuba ngaba ngabaphulaphuli bakho ekujoliswe kubo, uya kuxhamla kumhlaba ongakhuphisani kangako kuzo zombini intengiso kunye nembono yendalo. Ukuthetha ngeentengiso, eso ayisosicwangciso-qhinga sentengiso yedijithali kuluhlu lwanamhlanje. Xa kuziwa kwintengiso ehlawulelweyo, nceda ungaphosi imali yakho kwinethiwekhi yentengiso kuba uyifundile ukuba ilungile.
ppt uhlaziyo amakhonkco
Into esebenzela umntu omnye inokungasebenzi elandelayo. Endaweni yoko, cinga ngeeABC zentengiso ehlawulelweyo. Imele abaphulaphuli, B uhlahlo-lwabiwo mali no-C wentengiso.
Sele sigubungele iqela leqela ekujoliswe kulo. Ufuna ukubandakanyeka kuthungelwano lwentlalo apho ujolise kubo abaphulaphuli bakho. Uhlahlo-lwabiwo mali lulandelayo.
IBloomberg ixele ukuba uGoogle noFacebook bebonke bane-58% yeemarike ezili-111 yezigidigidi. Ngoku, indlela esebenza ngayo iintengiso ihlala isekwe kwifandesi. Okukhona bebaninzi abathengisi, kuya kubiza kakhulu kuwe nakum.
Masithi ukwishishini lenkomfa elikhuphisanayo, kwaye ukuba sikhangela eli gama liphambili kwi-Keywords Explorer neGoogle njengenjini yokukhangela, uya kufumanisa ukuba ixabiso li- $ 20 ngokunqakraza kwiiNtengiso zikaGoogle! Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lweentengiso, yithi, $ 1,000 ngenyanga, unokufumana ucofe ama-50 ngaphambi kokuba uhlahlo-lwabiwo mali luphele. Endaweni yoko, unokwenza izinto ezimbini: Ukhetho lokuqala kukukhangela amagama aphambili ngexabiso eliphantsi ngokunqakraza. Yiya nje kwingxelo yokuFanisa ibinzana ukuze ubone onke amagama aphambili kwiziko ledatha lethu elingundoqo elinelona gama liphambili.
Emva koko, cwangcisa icebo lokucoca ulwelo ukubonisa kuphela amagama aphambili kunye neendleko eziphezulu ngokunqakraza kancinci ngaphantsi kwesi-5 semali ukuya kwi- $. Ukusuka apha unokucoca uludwe kwaye ubone ukuba akukho ezinye iindlela ezinengeniso kunokuchitha i- $ 20 ngokucofa. Le 'nkomfa ibiza' usetyenziso inokuba ilungile njengoko ikota yexabiso.
Olunye uncedo kukuba isizathu sombuzo womkhangeli sicacile. Umntu oyikhangelayo ukhangele ngokucacileyo iapps eyenza umnxeba wenkomfa, ngelixa umntu okhangela 'ukubizwa kwenkomfa' unokukhangela izinto ezininzi ezahlukeneyo. Into yesibini onokuyenza kukuzama amaqonga entengiso angaziwayo anokubakho kubaphulaphuli bakho.
Emva kwayo yonke loo nto, iyentengiso. Ngoku onke amaqonga entengiso angazisa i-ROI kubathengisi babo. Ngaphandle koko ngekhe zibekhona.
Kodwa kuya kufuneka ufumane indlela yokuvala umsantsa phakathi kwenjongo yeqonga kunye nokwenza imali ngeemveliso zakho. Kwaye isisombululo uyoneliseka. Umzekelo, masithi uthengisa ifenitshala ye-boutique kwaye ucinga ukuba iPinterest liqonga elilungileyo lokuqhuba ezinye iintengiso.
Ngokoluvo lwam akuyi kuba luhlobo olulungileyo ukuthanda iqela lamaqhagamshela kwifenitshala ephezulu. ukufaka iisofa kunye neetafile zokutyela. Endaweni yoko, iiposti zebhlog zinokusebenza kakuhle apha, njengoko uninzi lwabantu lungena kwiPinterest ukufumana inkuthazo kunye nokufunda izinto ezintsha.
Le yindlela ibukeka ngayo le bhulorho ngokungathi ubonakalisa i-pushpin yakho. Ibhulorho iya kuthi emva koko ibe yiposti yebhlog eluncedo kuyo, umzekelo, '11 iingcebiso zokuhombisa igumbi lakho lokuhlala elingazukuphula ibhanki. Kwaye ngaphakathi komxholo, ungabonisa iimveliso zakho apho zixhasa incam othetha ngayo.
Zibethelele ii-ABC ze-p eziza kukunceda ukonyuse kwaye wandise amathuba akho okuguqula iidola ozifumene nzima kwi-ROI. Okulandelayo yenye yeentandokazi zam kwaye ezo ziipodcast. Ngoku zimbini iindlela zokubukela iipodcast.
Okokuqala, ukwenza eyakho, kwaye okwesibini, ukuba udliwanondlebe nomnye umntu podcast. Ukudala eyakho ipodcast kunokuba kuhle kuphawu lwentengiso kunye nolwakhiwo lwabaphulaphuli. Kodwa ukuba usaqala, kungathatha ixesha elide ukufumana naluphi na uhlobo lomtsalane.
Ukufumana udliwanondlebe kwiipodcast libali elahlukileyo. Iipodcasters zihlala zikhangela abantu abanomdla kudliwanondlebe nabo. Nokuba awunamava amaninzi kwihlabathi elikwi-intanethi, amava akho angaxhunyiwe kwi-intanethi kunye nobuchule kunokuba yindlela elungileyo yokuzifumanela isikhundla kwi-podcast eyaziwayo.
Ukuba awazi ukuba zeziphi iipodcast ekujolise kuzo, indlela elula yokukhangela amathuba kukujonga iipodcast zakho ozithandayo kunye nokufumana umntu kwishishini lakho ekwenziwe udliwanondlebe naye. Ukuba ujonga uMrhwebi kwiphepha lomlilo lepodcast, uyakubona esi siqendu noJim Kwik, ngoku ukuba sicofa udliwanondlebe, uya kuqaphela izinto ezimbini. Okokuqala, igama londwendwe lisisihloko.
Oku kuqheleke kakhulu kudliwanondlebe lwe-podcast. Okwesibini, ikhonkco likwiphepha. Imodareyitha phantse ihlala inxibelelana kwiphepha lasekhaya leendwendwe kumanqaku okubonisa.
Ukwazi oku, singasebenzisa isixhobo esinjenge-Ahrefs 'Site Explorer ukufumana zonke iipodcast awathi waxoxwa ngazo' iya kuseta indlela yokukhangela kwi-URL yokukhangela ukuze sikwazi ukufumana amaphepha adibanisa ngokuthe ngqo kwiphepha lasekhaya. , intloko phezu kwengxelo ye-backlinks eya kukubonisa onke amaphepha adibanisa ne-url. Okokugqibela, masisebenzise ukuquka ukukhangela kunye nohlobo kuJim Kwik. Kwaye ukugcina iziphumo zethu zichaphazela kakhulu, ndiza kuseta icebo lokucoca ulwelo ukuze likhangele igama lakhe kuphela kwizihloko zamaphepha abhekisayo.
Kwaye ngoku sinee-120 zepodcast esinokuthi siziphose kudliwanondlebe. Ukucoca ii-podcast ezifanelekileyo kunye nokwazisa umphathi ukuba kutheni bekukho kunye nexabiso onokuthi ulinike abaphulaphuli babo. Okulandelayo kuluhlu yintengiso ye-imeyile.
Ukuba ukhe wajongana nentengiso ye-imeyile, mhlawumbi uve abantu besithi 'i-imeyile ngukumkani'. Kodwa ndiyakuthembisa ukuba nje ukuba ungene kuyo, uya kufumanisa ngokukhawuleza ukuba ayifani ne-turnkey njenge-gurus ekwi-Intanethi evakalayo ngathi. Kwaye sukundifumana kakubi.
Ukuthengisa nge-imeyile kulungile. Kodwa okokuqala ufuna ukugcwala ukuze ufumane ababhalisile be-imeyile. ngeefom zokuguqula undwendwe lube ngumrhumo.
Ngokoluvo lwam, i-imeyile ngumdlalo omnandi wokunxibelelana nabaphulaphuli bakho kunye nokuthengisa izinto zokuthengisa amatikiti aphezulu. Ke incam yam malunga nokuthengisa nge-imeyile ilula kakhulu: uluhlu lwakho lwe-imeyile ukusukela kusuku lokuqala. Kubalulekile, kwaye unokuqokelela ii-imeyile kubantu abanomdla ukuqala ngazo, nokuba ayiluluhlu olubanzi.
Kodwa yinyani kwiinjongo zakho kwaye utyale ixesha elininzi kuluhlu lwakho lwe-imeyile njengoko usakha abaphulaphuli bakho kwaye ubone ukuba ingalinceda njani ishishini lakho. Isicwangciso sokugqibela kukusebenzisa iiforamu kunye neebhodi zoluntu. Iiforamu zoluntu ezinje ngeQuora, Reddit, kunye ne-Facebook ziindlela ezinkulu zentengiso.
Kodwa ngaphambi kokuba uqale ukuthumela amakhonkco kwimveliso yakho, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uziqonde. Kwaye konke oku kusekelwe kwimithetho engathethwanga kogaxekile. Okokuqala, sukukhuthaza imveliso yakho okanye iphepha lenkonzo kula maqela.
Injongo yabasebenzisi kula maqonga kukufunda. Akungathengiswa ngokuthe ngqo. Endaweni yoko, jonga ezi nethiwekhi njengendawo yokwabelana ngobuchule bakho, ukwakha ubudlelwane kunye nokunceda abanye.
Okwesibini, sebenzisa amakhonkco kumxholo wakho kancinci. Ukuba ubuthumela amakhonkco kwibhlog yakho ngalo lonke ixesha kwaye uye waqiqa entlokweni yakho ukuba oku akuyonyuselo emva koko unokuba ungalunganga kunokuba kunokuba sengqiqweni ngokusekwe kwinethiwekhi othumela kuyo. Umzekelo, iQuora ngokubanzi ibonelela ngeempendulo ezinde, kwaye licebo elilungileyo ukunxibelelana nomxholo wakho ukuba iyayixhasa imbono yakho.
Amaqela e-Facebook, kwelinye icala, ngamabali ahlukileyo athi uyinyani. Xa umntu ebuza umbuzo onje, 'Ndifuna ukuthenga ikhaya lam lokuqala kwaye ndizibuze ukuba ndingakwazi na ukubambisa ngento?' izithuba zeqela amakhonkco kwiwebhusayithi yabo, uyayibona indlela enokufumana ngayo ispammy? Endaweni yoko, iya kuba sengqiqweni into yokuthumela ikhonkco kwii-Calculator ze-Affordability zabanye abantu okanye unikezele ngentshayelelo kubabolekisi be-B. Inqaku leli, ukunceda kuqala kuhamba phambili ngakumbi kunokwazisa ngokwazisa, okunokonakalisa igama lakho.
Ngoku ndingathanda ukuva kuwe. Leliphi iqhinga lokuthengisa ledijithali ocinga ukuba lelona liphumelelayo kwintengiso ye-Intanethi? Ndazise kumagqabantshintshi kwaye ukuba ulonwabele eli nqaku ke qiniseka ukuba uyathanda, wabelana, kwaye ubhalise kwi-SEO ethe kratya kunye nezifundo zokuthengisa. Ke qhubeka usila, jolisa kwisitishi esinye sentengiso ngaphambi kokuzama okulandelayo, kwaye siza kukubona kwisifundo esilandelayo.
Ndikhubaza njani ukusingathwa kwale mihla?
Yiya kwi Iinkonzo isithuba, phawula Fihla zonke iinkonzo zeMicrosoft, emva koko ucofeKhubazakonke. Yiya kwisiqalo sokuqalisa, cofa Vula uMphathi woMsebenzi. Kwithebhu yokuqalisa kuMphathi weSebenzi, cofa ekunene kuyo yonke into yokuqalisa enikwe imeko yokuVumela ukukhethaKhubaza. Buyela kwithebhu yokuQala kuLungiselelo lweNkqubo, cofa u-Kulungile.
IHellotutorial ikubonisa ukuba ungakhubaza njani okwexeshana Windows Defender Windows 10 usebenzisa iZiko lezoKhuseleko kunye nendlela yesibini yokukhubaza ngokusisigxina Windows Defender Windows 10 usebenzisa iPolisi yeQela laseKhayaIndlela yokukhubaza okwethutyana Windows Defender kwi Windows 10 usebenzisa iZiko loKhuseleko vula iZiko loKhuseleko lweWindows Yiya kwiVirus kunye noKhuselo loKhuseleko Cofa ukhetho ukuseta intsholongwane kunye noKhuselo loKhuseleko Kulungile, ngoku cima ukhuseleko lwexesha lokwenyani Yonke le nto Windows Defender iyakukhubazeka okwethutyana, ke kwixesha elizayo ukuqala kwakhona ikhompyuter yakho, Windows Defender Antivirus izakuza buyela ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo Kulungile, masiyibuyisele umva Kwaye ngoku masikhubaze ngokusisigxina Windows Defender sisebenzisa iPolisi yeQela laseKhaya Njengoko ubona, iWindows Defender ivuliwe Kwaye ukuba ucofa kwifolda, phambi kokuba sifumane i-icon ye-scan Kulungile, masiyikhubaze, yiya kwibhokisi yokukhangela kwaye uchwetheze i-gpedit.msc, okanye ucofe isitshixo seWindows + R kwikhibhodi yakho kwaye uchwetheze umyalelo apho kwiQela laseKhaya Po Umhleli onamabala kuLungiselelo lweKhompyuter, cofa kabini uMlawuli, emva koko uye ku-Windows Components Skrolela ezantsi kwaye ufumane iWindows Defender Antivirus Cofa ekunene Cima iWindows Defender Antivirus kwaye ucofe kuHlela Khetha i-Enabled ukhetho lokucima Windows Defender Kulungile emva koko qala ikhompyuter yakho. senziwe, masijonge, njengoko ubona, iWindows Defender Antivirus ikhubazeke ngempumelelo, enkosi ngokubukela, nceda ubhalise kwisitishi sam kwaye ufumane iingcebiso ezilungileyo ngakumbi
Ndingayifumana phi indawo yokuseta yangoku?
UkuHanjiswa kwaMva kwale mihla yeyona nto iphambili ebaleka yodwa ngasemva nanini na xa kuhlaziywa into ebalulekileyo ekufakweni apho. Ikhutshelwe kwaye ithathwe kufakelo kwifom ezenzekelayo ngekhompyuter. Abasebenzisi banokuyifumana kwifolda ye- $ Windows.BT.
Ndimele ndenze ntoni xa ukuseta kwam umphathi kungasebenzi?
Kuqala, cinezela amaqhosha eWindows + mna kwikhibhodi. Iya kuvula useto kwiscreen sakho. Ngoku yenza ukhetho lweNkqubo kwaye emva koko ucofe kwiZaziso kunye neZenzo ezikwi-pane yasekhohlo. Ngoku cima ukhetho lokufumana iingcebiso, amaqhinga, kunye neengcebiso njengoko usebenzisa iWindows xa ungazukukhangela ibhokisi.
Uyibulala njani inkqubo yokusingathwa kwale mihla?
Bulala inkqubo yokubamba yokuseta yangoku Ungayibulala ngokuthe ngqo le nkqubo kuMphathi woMsebenzi. Vula uMphathi weSebenzi usebenzisa iqhosha 'ctrl + shift + Esc', fumana iNkqubo yokuSeta yangoku okanye inkqubo ye-SetupHost.exe, ucofe ekunene, kwaye ukhethe u-End Task. Nje ukuba wenze oku, inkqubo kufuneka iphele.
Uphi ukusetha umgcini okhoyo ngaphakathi Windows 10?
Lo Mncedisi woSeto lwale mihla (i-SetupHost.exe) sisifakeli esikwi-C: $ Windows. Isetyenziselwa ukufaka okanye ukulungiselela uhlaziyo kwi Windows 10.